Guri xuquuqada daganaanshaha la leeyahay - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Guri xuquuqada daganaanshaha la leeyahay
Waad degenaan kartaa guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay markii aad bixiso lacagta xaquuqda daganaansha (asumisoikeusmaksu). Lacagta la bixinayana waa boqolkiiba 15 qiimaha guriga. Haddii aad awoodin bixinta lacagta xaquuqda daganaanshaha, waxaad ka deynsan kartaa bankiga. Canshuurta ayaad ka goosan kartaa lacagta dulsaarka.
Markaad bil walba aad bixiso qiimihii leyska rabey kharashka isticmaalka (käyttövastike). Kharashka isticmaalka wuxuu ku xiran yahay guriga iyo degmada. Kharashka isticmaalka kama badan karo qiimaha kirada guryaha nawaaxigaas. Haddii daqliga kusoo galo uu yar yahay, waxaad codsan kartaa kaalmada ijaarka kharashka isticmaalka. Ka aqriso xog dheeri ah bogga InfoFinlandi Kaalmada ijaarka.
Guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay uma gadan kartid milki ahaan.
Sababta guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay?
Guri xaquuq deganaanshaha la leeyahay malaha khatar dhan dhaqaale. Sidaa darteed ayey khatar la’aan ku tahay inaad ku degenaato.
Deyn badan uma baahnid helista guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay.
Markaad rabto inaad ka guurto, uma baahnid inaad iibiso.
Waad degenaan kartaa guri xaquuqda daganaansha la leeyahay ilaa intaad rabto. Guri xaquuqda daganaanshaha lagaama saari karo guriga. Daganaansha gurigaasna waa mid abadiyan markii loo fiiriyo guryaha kirada ah.
Waad u bixin kartaa guei xaquuqda daganaanshaha la leeyahay dhaxal ahaan.
Waajibaadka degenaha guriga
Haddii aad leedahay guri xaquuqda daganaanshaha, waa inaad si rasmi ah u dagan tahay. Qof kale waad ka kireyn kartaa ugu badnaan labo sano. Waxaadse u baahan tahay ogolaansho milkiilaha guriga.
Yaa heli kara guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay?
Haddii aannan laga dhisin guriga kaalmo hantida dowlada, milkiilaha ayaa dooranaya qofka degaya.
Haddii guriga laga dhisey hantida dowlada, waad dalban kartaa, haddii
Aad tahay 18-jir;
Haddii aadan ku laheyn guri nawaaxigaas iyo
Aadan awoodin inaad guri ka hesho nawaaxigaas
Hantidaada cidana kuu qimeyn meyso, haddii aad tahay 55-jir ka weyn ama haddii aad uga guurto guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay mid kale.
Mararka qaar waxaa jiri kara sharuudahan kale.
Sidee lagu codsadaa guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay?
Degmooyin badab ayaa jira ooy ku yaalaan guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay.
Haddii aad rabto gurii xaquuqda daganaansha la leeyahay waxaad qaadataa lambarka safka ee dagmada. Lambarkana waxaad ka qaadan kartaa degmooyin kala duwan.
Lambarka safka waa lacag la’aan. Haddaad heysto lambar heysto, uma baahnid inaad codsato gurigii.
Dooro sarta aad ka rabto guri xaquuqda dagnaanshaha la leeyahay. Wargeli milkiilaha sarta. U sheeg sidoo kale nuuca guriga aad raadineyso. Saro badan ayaad ka codsan kartaa guriga. Waa suurogal inaad waqti dheer sugto guri.
Heshiiska xaquuq guriyeedka
Markaad hesho guri, lagal heshiis qoraal ah heshiiska xaquuq guriyeedka (asumisoikeussopimus). Heshiiskaas waxaa ku qoran qiimaha, kharshka isticmaalka iyo sharuudaha kale.
Waad u guuri kartaa guri xaquuqda daganaanshaha la leeyahay, markii aad bixiso lacagta xaquuq guriyeedka.
Markii aad ka guureyso
Markii aad ka guureyso gurigii, waa inaad wargelisaa milkiilaha sarta wargelin ka bixis (luopumisilmoitus). Waxaa laguu soo celin lacagtii xaquuq guriyeedka markaad ka baxdo gurigii.
Dalabashada guyaha xuquuqda degenaanshahooda la yeelanayoFinnish | Iswidish | Ingiriis
Xaquuq deganaansho guriFinnish
Xaquuq deganaansho gurFinnish